Ebe Ntanetị nke Online Austrian - Codes Bonus Codes
Online cha cha Daashi Codes > Ebe Ntanetị Ịntanetị nke Austrian
(499 votes, nkezi: 5.00 si 5)
Loading ... Ịgba chaa chaa na Austria dị nnọọ iwu. Ọzọkwa, ruo ọtụtụ afọ ọ bụ ịgba chaa chaa maka isi ego nke mba. Ụdị ịgba chaa chaa niile dị n'Austria na-achịkwa nke Federal Ministry of Finance (Bundesministerium für Finanzen). Taa, enwere casinos 12. A na-enye ndị nleta ọtụtụ egwuregwu dị iche iche, gụnyere ruleti, poker, blackjack, oghere oghere na jackpot na-agba ọsọ na ịgba chaa chaa ndị ọzọ.
Ọkachamara ịgba chaa chaa kachasị amara n'Austria bụ Casino, nke dị na ụlọ nkwari akụ Grand Hotel de l'Europe. Ụlọ nkwari akụ ahụ n'onwe ya wuru na 1907, na ụlọ ịgba chaa chaa mgbe ọ meghere ọha na eze ebe ọ bụ na 1984 ma nwee mpaghara mita 600. Ebe ọ bụ na Austria bụ ebe a na-ewu ewu nke ndị njem nleta, a na-ewu ọtụtụ casinos dị nso na họtel. Rịba ama na ụlọ ndị na-egwu egwu na obodo a anaghị arụ ọrụ n'oge elekere. Ha na-emeghe ndị ọbịa sitere na 18: 00 ma ọ bụ 19: 00.
Ịgba chaa chaa Intanet dị ogologo oge na mba a. Ụfọdụ ebe ịgba chaa chaa n'Ịntanet dị n'Austria na Europe bụ otu n'ime ndị kasị baa uru, ọ bụ ezie na isi ụlọ ọrụ ha adịghị na mpaghara nke mba ahụ, dị ka Islands Channel. Rịba ama ụlọ ọrụ Austrian online casino Bvin (Bwin), nke enyere ikikere n'ọtụtụ mba gburugburu ụwa.
Iwu iwu ịgba chaa chaa n'Ịntanet na-enye gị ohere ịnye ikikere maka ụlọ ọrụ ndị ọzọ dị na mba ahụ, nke bụ - ịmepụta ọhụụ ịgba chaa chaa ọgbara ọhụrụ. Otú ọ dị, e nwere otu ọnọdụ - weebụsaịtị ndị a bụ nanị ndị ịgba chaa chaa n'ógbè. N'otu oge ahụ, enweghị ihe mgbochi ọ bụla banyere esemokwu ahụ na ọnụ ọgụgụ mba ụwa, Austria na ndị mmadụ nwere ike iji ọrụ saịtị ndị ọzọ
Hụ ndepụta nke saịtị ntanetị n'ịntanetị nke na-anabata ndị si Austria, ma nye ha egwuregwu dị elu ma dị mma. N'ebe a, ị ga-ahụ ọtụtụ ntụrụndụ dị iche iche site na ntinye oghere na egwuregwu ndị na-ere chaa chaa na-ere site na ndị na-ere ihe dị otú a dị egwu NetEnt, Merkur, IGT, Novoline, Microgaming, Betsoft, Egwuregwu Egwuregwu, na ọtụtụ ndị ọzọ. I nwekwara ike gụọ nyocha anyị banyere saịtị ntanetị n'ịntanetị, iji mara ọkwá kacha mma n'ịntanetị, ụgwọ ego na nhọrọ ịkwụ ụgwọ dịnụ maka ndị egwu si Austria.
Mmiri snow-capped Alps, ọdọ mmiri ndị dị ezigbo mma na swiiti dị ụtọ mozartkugel na marzipan - ihe a na ihe ndị ọzọ bụ ihe mara mma nke Austria. Na obodo a CasinoToplists na-eleta gị taa ka ịchọta kasịnụ kacha mma na klọb egwuregwu.
Austria - ịgba chaa chaa na ịgba chaa chaa na mba a:
Gọọmentị Federal na n'otu oge ahụ mba ndị omeiwu bụ aha aha Republic nke Austria. Mbụ a kpọtụrụ aha ya site n'afọ 996 AD Austria dị n'etiti Europe. Akụkọ ihe mere eme nke mba ahụ nwere njikọ chiri anya na steeti Germany nke gọọmentị Bavaria - naanị na 1156, mba ahụ nweere onwe ya. N'otu oge na mba ahụ, e tinyere ya Czech Republic, Croatia na Hungary, na mgbakwunye siri ike ịme mmekọrịta toro toro , France na n'ezie Germany . Obodo obodo bụ obodo Vienna. Mgbe njedebe nke agha ụwa nke abụọ Austria dị ka e kewara Germany na mpaghara 4.
A nyere ikike 1922 nke mbụ iji wuo ụlọ ịgba chaa chaa, e bipụtara ụlọ ọrụ ịgba chaa chaa mbụ na Salzburg. Kemgbe ahụ, mmiri buru ibu, ma otu ihe ka dị - a na-ekwe ka cha cha na Austria. Ọ bụ nzukọ kachasị nke "Casinos Austria", ọ na-arụ ọrụ casinos 12 ma na-agụnye òtù ndị ọzọ dịka ụkpụrụ nke ijide.
Ya mere, ụlọ ọrụ "Casinos Austria International" maara nke ọma karịa ókèala nke mba ha: o nwere alaka na 15 ma na ugbu a n'okpuru ọgba chaa 57 ya. Tụkwasị na nke ahụ, ụlọ ọrụ ahụ mepụtara mpaghara na-akwụ ụgwọ nke azụmahịa ịgba chaa chaa: ụgbọ mmiri na casinos na ụgbọ. Ọnụ ọgụgụ ha na-abịa ngwa ngwa nke 100.
Bad Gastein - Salzburg nke dị n'ebe ndịda
N'ime obodo a, otu n'ime ụlọ ahịa kachasị mma ọ bụghị naanị n'Austria, kamakwa na Europe dum. Ọ dị na ụlọ nke Grand Hotel de l'Europe, wuru na mmalite narị afọ nke XX. Na - arụ ọrụ mgbe nile site na 19: 00, na ndị niile chọrọ ịga leta ya dị mkpa iji ṅaa ntị na koodu uwe - a na - anabata ebe a na - egwu egwuregwu na obere akpa ebe a. Na ya ịkwesịrị inwe akwụkwọ edemede ọ bụla. Isi ihe - ọnụnọ nke foto gị, ma tọọ afọ 18. Akwụkwọ mpempe akwụkwọ ahụ na-akwụ ụgwọ euro 23, ị ga-enweta akara ngosi aha na Euro 25.
N'obodo a, ụlọ cha cha «Casino Salzburg» dị na nnukwu obí nke Schloss Klessheim, nke a na-ewu na-acha ọkụ na-acha, nke na n'onwe ya bụ mma. Ebe a abughi nani ime ihe ndi ahu gbaa. Ịbanye n'ọdụ ụgbọ ala ahụ, ụgwọ ya dabere na oge na ihe ndị na-eme n'obí. Ọ nwere ike ịbụ ndị ọrụ egwuregwu ma ọ bụ ndị ọbụ abụ.
Velden obodo a na-ahụkarị bụkwa onye a ma ama maka casinos, nke e mere na 1950. Ma ebe ọ bụ na ndị na-achọ ịchọta ọdụ nke Fortune kwa afọ na-aghọwanyewanye, ụlọ nke ụlọ chaa chaa agbasa. Ụlọ ọhụrụ ahụ, nke meghere na 1989, nwere ike iji 4,000 ọbịa ma ọ bụghị obere ọnụ. E nwere ụlọ oriri na ọṅụṅụ, bistro, ụlọ mmanya, na egwu n'èzí plosshaka-terrace n'elu ọdọ mmiri ahụ dị ebube. Ọ bụ nke ọma otu n'ime casinos kachasị ewu ewu na nke oge a na Europe.
Vienna Opera. Ebe: Vienna, Opernring, 2. Austria na-enwe obi ụtọ maka ọgụgụ isi - Mozart, ya mere nleta na "Vienna Opera" dị mkpa ka a gụnye ya na ndepụta nke nlebara anya na-elegharị anya;
Hundertwasser House. Ebe: Vienna, Untere Weissgerberstrasse, 13. N'okwu a, ị ga-ahụ otu n'ime ụlọ ndị kachasị mma na Austria.
Sigmund Freud Museum. Ebe: Vienna, Berggasse, 19. Jide n'aka na ị gaa na ebe ngosi nka nke ọkà mmụta sayensị a ma ama. N'ebe ahụ, a ga-agwa gị ọ bụghị naanị maka ndụ kamakwa nke omume ahụike. Ụlọ nke nnukwu psychoanalyst dị ndụ ruo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 47.
Osisi Vienna. Ebe: Vienna, Wienerwald. Ike gwụrụ n'okporo ámá dị iche iche nke Vienna, ị nwere ike ịdọrọ ike mgbe niile na nnukwu ogige obodo ahụ.
Museum "History of Art". Adreesị: Burgring 5. Lee anya gị ga-egosi ihe osise ndị mbụ dị otú ahụ dị ka Titian, Raphael, Vermeer na ndị ọzọ edepụtara, yana ihe oyiyi na ihe dị iche iche.
N'ihi ọdịdị nke aha, mgbe ụfọdụ, Austria na Australia. Ya mere, ọ bụ ihe ncheta kachasị mma "Austria: enweghi kangaroos";
Osimiri Gruner na-ezobe ogige ntụrụndụ n'ezie - na oyi, ọ bụ nanị 1-2 mita dị omimi, ma mgbe idei mmiri nke gbazee mmiri ghọrọ 12 mita;
3.1.1.1 Bad Gastein - Salzburg nke dị n'ebe ndịda